Zingakanani iimveliso ezibiza kakhulu ngo-2014, kwaye kuya kwenzeka ntoni ngo-2015? Izibalo, izibikezelo, uluvo lweengcali.
Ziziphi iimveliso eziza kuphakama ngentengo ngo-2015?
Ixabiso lemali - eli gama langena kwimpilo yemihla ngemihla yamaRashiya ukusuka kwiingxowa-mbono zezoqoqosho kwaye yaba yinxalenye ebalulekileyo yobomi bomntu wonke. Le yindlela umlando weRashiya entsha uphuhlisiwe ngayo, oye wahlala kwikota yeshumi leminyaka. Ngaphambi koku, ukunyuka kwamaxabiso kwahamba kunye nokuphila kwethu, kuphela igama lakhe lalingenanto. Ukusilela kwakungekho nto engathandekanga kwiRussia, ngoko yiSoviet. Uthobelele ubomi babantu kwiindawo zabo, abaphoqa ukuba bavuke ebusuku bajikeleze esitolo. Kwaye ngoku siphinde siva ilizwi elithi ukunyuka kwamaxabiso ngokuphindaphindiweyo. Izigwebo, ixabiso leoli, ukuhlaziywa kwe-ruble - konke oku kuhlawulela i-flywheel ye-inflation. Yintoni ongayilindela? Ngaba imbali iya kuphinda, kwaye ngomhla omnye wemvula siya kubona ukuphinda konyaka we-98, xa iindleko zeempahla ngobusuku obunye zanda kathathu. Masizame ukujongana nale ngxaki kunye neengcali.
Ulwimi olomileyo lwamanani: ukunyuka kwexabiso lemveliso ngo-2014-15.
Ngokwearhente karhulumente, kunyaka owedlule, amanani okutya enyuke ngo-15%. Ngonyaka ka-2015, ngokwemiqathango yezibhengezo ezisemthethweni, iindleko zabo ziya kukhula ngenye i-10-15%. Imveliso nganye iya kuphakama kwixabiso ngo-20%. Intengo engenhla iya kuphakama kuphela kwizinto ezinqabileyo kwiRussia izitya ezingenanto kunye nezithako zangaphandle. Ngokuqinisekileyo, umfanekiso uhluka ngommandla, kunye neendawo ezingakhuselekanga zoluntu, ezineendleko zokutya ezenza isabelo esibalulekileyo kwisabelo-mali, siya kuziva umphumo ombi wokunyuka kwamaxabiso. Konke okunye, utshintsho lwexabiso aluyi kuba luphawu. Ngako oko, uvuyo kwivenkile lubangelwa ngokusisiseko ngamava aseRashiya, kwaye okwesibini ukunyuka kwamaxabiso.
Iingcali ngokulandelelana kwezinga eliphezulu lokunyuka kwamaxabiso ekuqaleni konyaka. Ngentwasahlobo, imeko kufuneka izinze kwaye ukunyuka kwamanani okutya kunye nezinye izinto ziya kuphuculwa.
Ukunyuka kwexabiso lemveliso ngenxa yezohlwayo
I-15% yokunyuka kwamaxabiso eminyaka yonyaka ngokuyinhloko ngenxa yokuxabisa i-euro kunye nedola, kodwa yintoni efihliweyo emva kwegama elithi "iimveliso zomntu ngamnye", ngamanye amazwi, ziza kuthini na izithintelo kunye nokuchaswa kwezigwebo kubomi baseRussia? Ukuvinjelwa kokungenisa ukutya okuvela kumazwe asentshona akunjalo. Kuphela kuvinjelwe ukuxhaswa kwemali (ukubolekwa) kwamashishini aseRussia. Ukungakwazi ukusebenzisa imali engaphantsi kweNtshona ngeebhanki zaseRashiya kubangela ukwanda okuncinci kwamanani kuwo onke amacandelo oqoqosho.
Ama-suit-suits, eyenzelwe ukwandisa ukhuseleko lokutya kwe-Russia ekujonganeni nokukhula, ukuphakanyiswa kwamaxabiso enyama, iziqhamo kunye nemifuno kunye nemveliso yobisi. Kwiinkoliso ezininzi, iimveliso ezivinjelwe ukungenisa zikhuphuke ngo-10-15%. Ukwanda kwenyuka kwamanani kubhalwe kwimida, ngokukodwa kwi-Primorsky Krai, kwingingqi yaseSakhalin, apho abathengisi bejoliswe ngokukodwa kwiimveliso zangaphandle, ukukhula kwempahla nganye kwafika kuma-25, 40 kunye no-60%.
Ngokuhamba kwexesha, abavelisi baseRussia baya kuba nokukwazi ukutshintsha iimpahla zangaphandle, kwaye ukunyuka kwamanani kwixabiso lemveliso kule nto kunceda kuphela. Amashishini aqokelela inzuzo eqokelelweyo ekudalweni kweefama ezintsha, ezitsha iimveliso. Oku kuya kuthatha iminyaka engama-2-3.
Kwakhona uya kuba nomdla kumanqaku:
Kutheni i-buckwheat eninzi?
Kutheni ixabiso leoli liwela?
Indlela yokugcina imali kwixabiso lokunciphisa ngo-2015?
Yintoni enokuyenza ngokulondolozwa kweeruble ngoku?
Indlela yokuziphatha kwizithuthi zikawonkewonke
Isibikezelo sezulu: kuya kuba yintoni ehlobo le-2016 eRashiya
Ngubani oza kuphumelela ukhetho ngo-2016 kwi-State Duma - imibono kunye neembono zeengcali, imibono yeembono
VI imikhosi enomvuzo wokuvuza umvuzo wehlabathi jikelele "Ubabalo"
Ixesha liguqulelwe nini ixesha lasehlobo-2016 eRashiya?
Kuphi ukufumana indoda ecebileyo
Izibonakaliso zezifo ezahlukeneyo zesifo somzimba
Usana endlini: njani ukulungisa iingxabano zentsapho
Izambatho zekhaya ezityebileyo
Inyaniso yonke malunga ne-soy: inzuzo kunye neyingozi
Usuku lokuqala lokuzalwa komntwana
Isihlalo seMoto kwiintsana
Iimvumba ze-Varicose, iindlela zonyango
Izicwangciso ezisisiseko xa ukhetha iTV
Ukulahlekelwa ubuntombi: njani ukuphepha intlungu?
Ikhaya lam yinqaba yam: ngaphakathi eMelika
Amanyathelo okukhusela iimpawu zokuqala zokubanda komntwana